Gaas: Eedeynta loo jeediyey DF waa mid qaldan, Alshabaab waa cadow Soomaaliyeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaas: Eedeynta loo jeediyey DF waa mid qaldan, Alshabaab waa cadow Soomaaliyeed
A warsame 17 March 2016 17 March 2016
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland, Cabdi weli Cali Gaas oo ku sugan dalka Maraykanka ayaa markii u horeysey ka hadley eedeyn wasiir ka tirsan maamulkiisu u jeediyey dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii Alshabaab ka tegay gobollada Koonufeed gaareen deegaannada Puntland.
Dr. Cabdiweli oo waraysi siiyey laanta afsoomaaliga ee VOA ayaa u sheegay in eedeynta loo jeediyey Dowladda Federaalku ee ahayd “in aysan ka lug marneyn al-Shabaabka doonyaha ku yimid Puntland” ay tahay mid qaldan, wuxuu sheegay in iyaga iyo Dowladda Federaalku isku cadow yihiin, al-Shabaana ay yihiin cadowga umadda Soomaaliyeed.
Hadalkii ka soo baxay wasiirka Amniga Puntland, Cabdi Cali Xirsi (Qarjab) ayuu sheegay in uu yahay mid uu si sarbeeb ah u yiri wasiirku, “laakiin sida saxda ah waa al-Shabaab anaga iyo Dowladda Federaalkaba cadow ayey noo yihiin” ayuu yiri Gaas.
Markii Alshabaab hubeysan gaareen deegaanka Garacad iyo deegaano kale ayaa wasiirka Amniga Puntland wuxuu yiri “Puntland waxaa kusoo duulaay Al-Shabaab, ciidamada al-Shabaab ayaa soo marey Hobyo iyo Xarardheere, isla markaana aysan ka amrneyn in Dowladda Federaalku lug ku leedahay!”.
Mar la weydiiyey Madaxweynaha Puntland in ay dalbanayaan ciidamo shisheeye ayuu ku jawaabey Puntland waa isaga filan tahay in ay iska difaacdo al-Shabaabka horay ayey noola joogeen, keliya waxaa dheer kuwa hadda dhanka konfureed nooga yimid, AMISOM iyo cid kale oo kabahooda soo geliya Puntland uma baahna, waxa aan u baahanahay waa in nala siiyo taakulada ciidanka Soomaaliya la siiyo qaybta aan ku leenahay ayuu yiri Dr Cabdiweli Gaas.
Dagaal u dhaxeeya Puntland iyo Alshabaab oo markale ka qarxay deegaanka Suuji
China firm buys Toshiba home appliance unit